TRUESTORY: January 2014
ကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာ Entrepreneur များအတွက် မရှိမဖြစ်လို အပ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြော ရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုိ့လည်း နားလည်နိုင် ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင် Product တစ်ခုကောင်းကောင်း ထုတ်ဖို့ ရေး ဆွဲထားတဲ့ Project ကို ထုတ်ပြပြီး Private Investor ကိုပြရင်ပြ
ပတေးနေ့ မနေ့က အတည်ပြု ပြောကြား
၂ဝဝ၅ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့အဲဒီဒုက္ခသည် များ ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ရေး
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် လုံးလည်ချာလည်လိုက် ခွင့်သာခိုက်ကမှ မလိုက်ချင်လျှင်
ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Daily သတင်းစာပါ ဆရာကျော်ဝင်း၏ ၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၄ သို့ မပြီးသေး သော ပန်းချီကား ဆောင်း ပါးကို ဖတ် ရသည်။
၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်က UMFCCI တွင်ဟောပြောခဲ့သည်များကို အနှစ်ချုပ်ပြန်ရေး ထားခြင်းဟု ဆရာကပြောပါသည်။
"တိုင်းပြည်တစ်ပြည် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီဆိုလျှင် သူရဲကောင်းတွေပေါ်ထွက်တတ်ပါသည်။ သို့တစေ သူရဲကောင်း တွေ လိုသည်ထက်ပိုများနေလျှင်လည်း အဆိုပါတိုင်းပြည် ပြန်ကံ ဆိုးသွား
ဗြိတိန်နိုင်ငံ မြန်မာ့ ပြည်တွင်းရေး စွက်ဖက်ရာရောက် ဟု ဆို
ပုဒ်မ ၅၉(စ)ပြင်ဆင်ရန် ပြောကြားခဲ့သော
စွက်ဖက်ရာ ရောက်နေသဖြင့် လက်မ
ခံနိုင်ကြောင်း အမျိုးဘာသာသာ သနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ
Posted by TRUE STORY at 2:29 PM No comments:
KIA/KIO ဖမ်းဆီးထားသော ရှမ်းလူငယ်တွေ ပြန်လွတ်ပေးနိုင်ရေး၊ ဒေသခံရှမ်းလူမျိုးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမျိုး၊ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး
Posted by TRUE STORY at 2:24 PM No comments:
အကြောင်းအရာ ။ မည်သည့်အ တွက်ကြောင့်နှောင့်နှေး
ကြန့် ကြာ နေရ သည်ကို စိစစ်ဖော်ထုတ်ပေးပါရန် တင်ပြခြင်း ။
၁။ မောင်တောမြို့ နယ်နေ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူ ၄၁၃၉ ဦးမှရခိုင်ပြည်နယ် မှ ရွေးကောက်ခံ
Posted by TRUE STORY at 2:19 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 2:15 PM No comments:
၁။ ကိုယ့်ချစ်သူ ကောင်မလေးအတွက် ပလက်တီနမ် ၊
Posted by TRUE STORY at 5:42 PM No comments:
မြန်မာအမျိုးသားကွန်ယက်၏ လုပ်ဆောင် ချက်မှာ စီးချင်းပွဲတစ်ခုလို ဖြစ်၍ ထိပ်တိုက်ရ င်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီ၏ အခြေ ခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူ လိုက်ပါလျက် ရှိသည့် ဦးထင်လင်းဦး (Wisdom Villa) က ၄င်း၏ လူမှုစာမျက်နှာ
နဲ့အတူ သူမရဲ့အချစ်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
တလောမှာတော့ နယ်ရှိုးတွေ ဆိုဖြစ်တာ
များတယ်။ ရန်ကုန်ရှိုး သိပ်မရှိဘုး။ နှစ်လ
ပိုင်းမှာ ရှိုးပွဲတွေ နည်းနည်းနားပြီး ဒုတိယ
အခွေဖြစ်တဲ့ ပစ်တိုင်းထောင် စီးရီးအတွက်ကိုပဲ
တယ်။’လို့ သူမက ပြောပါတယ်။
အချစ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ချစ်သူများနေ့ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမယ် ဆိုတာကိုတော့
Roaming အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Orange နဲ့
Posted by TRUE STORY at 5:26 PM No comments:
28.1.2014 ရက်နေ့ ညနေ ဒုချီးရား တန်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားမှုမှာ မတော်
တဆ လောင် ကျွမ်းမှုမဟုတ်ဘဲ
သူတို့ ကိုယ်တိုင် မီးရှို့မှုဖြစ်ကြောင်း၊
သူတို့အိမ်ခေါင် မိုးများပေါ်တွင် ဓါတ်ဆီစိမ် ကောက်ရိုးလိပ်များနှင့် ဖျာလိပ်များအား စီတန်းထား သည်တွေ့ရှိရကြောင်း၊မီးမ
လောင် ဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သော အိမ်တ ချို့၏ ပုံများမှ သက်သေ ခံလျှက် ရှိသည်။မနက်ဖန် ရောက် ရှိလာ ကြမည့် EU အဖွဲ့များထံတွင် သူတို့ ရဲ့ တဲကုတ်သာသာရှိသော နေအိမ် များ အား မီးရှို့ပြီး နေအိမ် အသစ်တောင်းမယ်ဆို တဲ့သဘော ကို ဆောင်နေပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
လာမည့် သြဂတ်လတွင် GSM Simcard များအား အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ အခမဲ့ ဖြန်ဝေပေးမည်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှသည့် ကုမ္ပဏီ ၃ ခု
အနက် ရတနာပုံတယ်လီပို့အများ
ပိုင်ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် လာမည့်
သြဂတ်လတွင် GSM Simcard
များအား အရေအတွက် အ ကန့်
အသတ်မရှိ အခ မဲ့ ဖြန်ဝေပေးသွား
မည်ဖြစ်ကြောင်း ရတနာပုံတယ်လီပို့ 
အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ ဇန်နဝါရီ ၂၉
အကြောင်းကို မြန်မာပြည်သူတို့ ဘယ်လောက်အထိသိရှိပါသလဲ။ အနည်းအကျဉ်းမျှသာသိလျှင်သိ သို့တည်းမဟုတ် လုံးဝမသိရှိကြပါ။
မဟုတ်။ မြန်မာအများစုအတွက် ပူတာအိုသို့သွားရသည့်ခရီးသည် သူတို့၏စီးပွားရေးအခြေအနေအရ
Posted by TRUE STORY at 7:58 AM No comments:
(Food) ကို မင်းဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊စားချင်
စိတ် (Appetite) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
2. ပိုက်ဆံပေးပြီး ဟာသတွေ (Fun) ကို မင်း ဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊ပျော်ရွှင်ခြင်း (Joy) ကို
Posted by TRUE STORY at 2:20 PM No comments:
ကိုကြည့်နေတဲ့ ကလေးလေးမျက်ဝန်းရယ် ..ကလေးလေး ဆုပ်ကိုင်ထား တဲ့ အီကွတ်မန့် (equipment) ရယ် ရှေ့
Posted by TRUE STORY at 2:17 PM No comments:
မရှိသည့် လုပ်ကြံသတင်းများကို ခိုင်ခိုင်မာမာဖြင့် ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ရပ်အမှန်၊
Posted by TRUE STORY at 2:08 PM No comments:
NLD ပါတီအတွင်း ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ခွင့် မရ သောကြောင့် အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ပြီး အဖွဲ့ ကို ပြန်ဆော် မည့် သူများ ပါတီမှ အစောဆုံး ထွက်သွားသင့် ကြောင်း နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၊ မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာ ပါတီ ကော်မတီဝင်များ ၏ ပြဿနာအချို့တွင် ဗဟို၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သာ ခံယူ ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ် အောင်ဆန်း စုကြည်က ၂၃-၁-၂၀၁၄ ရက်တွင် လူငယ်ကော် မတီအချို့နှင့်နေပြည်တော်ရှိ ပည်သူ့ လွှတ်တော်
Posted by TRUE STORY at 1:46 PM No comments:
စုလွှတ်တော်သို့ MPA သင်တန်းသားများ လာရောက်လေ့လာစဉ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံကာ လွှတ်တော် ဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်းပြောကြားရာ၌ ထည့်သွင်း ပြော
Posted by TRUE STORY at 1:40 PM No comments:
သတင်းအမှားများ အသုံးပြုကာ သတင်းဖော်ပြခြင်း၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ
Posted by TRUE STORY at 1:29 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင် ဂုံးကျော်တံတားအောက်ရှိ Excel Tower ၆ထပ်တွင် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက် ည ၉ နာရီခွဲခန့်က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ (ဓါတ်ပုံ - ဟောင်ဆာ (ရာမည)/မဇ္ဈိမ) မီးသတ်ကား ၁၅ စီးခန့် ရောက်ရှိနေပြီး ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် မီးငြိမ်းသွားပြီ ဖြစ်သည်။
သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်း အပေါ်ဆုံးထပ် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား၊ ယနေ့ နံနက် ၁နာရီအထိ ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေ
ရွှေဥမင်ဘုရား စေတီပုထိုး၏ ဘုရားဆင်းတု မျက်နှာတော်တွင် ထူးခြားစွာ ပျားများလာရောက်စွဲ
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ၊
ဓနု ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ၊
ပင်းတယမြို့ ၊ ရွှေဥမင် ဘုရား
ပရဝုဏ် ရှေးဟောင်း စေတီပုထိုး
တစ်ဆူ၏ အရှေ့ဘက်မုခ် အတွင်း
ကိုးကွယ် ထားသော ဗုဒ္ဓရုပ်
ပွားတော် ၏မျက်နှာ တော်တွင်
သဘာဝ ပျားများ လာရောက်
စွဲအုံလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည် ။
အဆိုပါ သဘာဝပျား များသည်
ပျားလေး (ခေါ်) တောပျားကြီး များဖြစ်ကြပြီး သစ်ပင် ၊ သစ်ကိုင်း များတွင်သာ စွဲအုံလေ့ ရှိပြီး
နိုင်ရေး အတွက် ဆက်လက် လုပ် ဆောင်သွားမည်ဟု ကရင်အမျိုး
ပြည်တွင်း ပြည်ပက စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေ ထိတ်လန့်သွားအောင် တုန်လှုပ်သွားအောင် မိူအောက်မြေပြင် စကြာဝဠာတခွင် မြန်မာဆိုတဲ့ အသံကြီး ဟီးထသွားအောင်......
၂၈.၁.၂၀၁၄ ယနေ့ နံနက် ၀၈း၀၀
အချိန်တွင် ရန်ကုန်မှ ဟဲဟိုးသို့ ခရီးသည်
အပြည်ဖြင့် ထွက်ခွါသွားသော Air KBZ
လေယာဉ် ART-72 သည် ရန်ကုန်လေ
ဆိပ်မှ ထွက်ခွါပြီး မိနစ်အနည်းငယ်
အကြာတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွါးသဖြင့် ရန်ကုန်
ပြန်လည် ဆင်းသက်ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရ
ပါသည်။ ခရီးသည်များ ထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ ကိုမူ
မသိရှိရသေးကြောင်း၊ ခရီးသည်များမှာ လေယာဉ်
အရေးပေါ် ထွက်ပေါက်မှ ထွက်ခဲ့ရကြောင်း
ခရီးသည် တဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။
Posted by TRUE STORY at 1:13 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 1:05 PM No comments:
နည်းတဲ့ပိုက်ဆံမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ကူညီ တာပါ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဌ မနေ့က ကျနော်တို့ ဒဂုံမြို့သစ်တောင် လာသေးတယ်။ ဆေးရုံ လာ ကြည့် တာ။ အရင်က ပိုက်ဆံလေးနည်း နည်း ချေးဖို့ အတွေ့တောင်မခံတဲ့အဖွဲ့အစည်း အခု တူးဘီလီယံ ရက်ရက်ရောေ ရာ ပေး တာနော်။ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးကို မျက်ခြေ မပြတ်ကြည့်နေတာ။ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တပ်ကို
Posted by TRUE STORY at 1:00 PM No comments:
ဝယ်ယူလို့ ရနိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အကောင်းဆုံး တက်ပလပ်များ
ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက်
(၁) Amazon Kindle Fire HDX တက်ပလပ် ယူရို
Posted by TRUE STORY at 12:47 PM No comments:
ဒေါ်စုကို စစ်တပ် လေယာဉ်ကွင်းမှာ ပေးမဆင်းဘူး… စစ်တပ်ပိုင် ကွင်းမှာ ဟောပြောပွဲ ပေးမလုပ်ဘူး… ဒါ ဘာထူးဆန်းပါလဲ
တစ်ပါတီစနစ် နဲ့၂၆ နှစ် ….
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့၂၂ နှစ် …
အဲဒီ ကာလတွေကို ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့ နောက်
၂၀၁၀ အရပ်သား အစိုးရ ချိန်းပြီးတဲ့ ကာလမှာ…
မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်စတီကျူးရှင်း အများစုဟာ ….
အပြောင်းအလဲ ရဲ့ ဂယက်ကို ...
သိသိသာသာ ဖြစ်စေ …
မသိမသာဖြစ်စေ ရိုက်ခတ် ခံရပါတယ်…
တစ်ချို့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ ....
တစ်ချို့ ကတော့ ...
တစ်ချို့ က ....
ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒဆရာတော်က ရုပ်ပွားဆင်းတုကိုးကွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်၍ ဤသို့မိန့်တော် မူပါသည်။ = အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာအောင် ဘုရားကို ကြည်ညိုတတ်ကြတယ်။ အဲဒီလို ကြည်ညို တော့ ဒီပုံဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်ကင်းမယ်။ ဒါနဲ့ ထုထားရင်တော့အန္တရာယ်ကင်းမယ် ဆိုပြီး တော့ အဲဒီလို ကြည်ညိုတတ်ကြတာပဲရှိတယ်။ ဒီအသားနဲ့ထုရင်၊ ဒီပုံထုရင်တော့ လာဘ်လာဘတွေ ပေါမယ်ဟေ့၊ စီးပွားဥစ္စာတွေ တတ်တယ်ဟေ့ ဆိုပြီးတော့ ကြည်ညိုတတ်ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ကြည်ညိုတဲ့သဒ္ဓါတရားကို ပြန်ကြည့်ပါ။ အန္တရာယ်ကင်းအောင်၊ အန္တရာယ်တွေ မလာရအောင်လို့၊ ဟာ....ဒက္ခိဏသာခါဆိုရင် မီးကွင်းတယ်ဟေ့၊
သည်ဥပဒေဟာ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေပါ။ ဥပဒေအာနိသင်ရှိတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ အဲဒီဓလေ့ထုံးတမ်းများဟာ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေမဟုတ်တဲ့အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ဥပဒေရေးဆွဲ
100004619984171&type=1 မြန်မာအင်ပါယာတွင် ထေရ၀ါဒ ဘယ်ကစဟု တိတိပပပြောဆိုရရင် ပုဂံခေတ် အနော်ရ ထာမင်းလက်ထက်က စသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ နဂိုမူလကြီးစိုးနေကြသော အရည်းကြီးများ ၏ ရေငုပ်၊မီးလှုံ၊တုံးခုံ၊ဇယ်ခတ် မိစ္ဆာအယူ တစ်ရပ်ကို ဖယ်ရှားသုတ်သင်၍လည်းကောင်း ၊သထုံဘုရင် မနူဟာမင်းထံမှ ပိဋကတ်သုံးပုံကို
Posted by TRUE STORY at 7:49 AM No comments:
သို့သော် ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းပါးသည်။ထက်မြက်သောဥာဏ်ကို သတိတမံဖြင့် မထိန်း ချုပ်နိုင်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် စဉ်လာမပျက်ခဲ့သော ဇာတိ၊ပုည၊ဂုဏ်မာနတို့ကို ဇောက်
နေ့တိုင်းမြင်နေရတဲ့ သမ္မတဖြစ်ရေး ..တခါလာဦးသိန်းစိန်.. တခါလာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်..
မေးပါရစေဦးရှင်.. ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲ့ဒီအိုကြီးအိုမနှစ်ယောက်ကလွဲရင် သန်မာဖျတ်လတ်ပြီး စီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့ လူတော်တွေများမရှိတော့လို့လားရှင်.. ဒီသက်ကြားရွယ်အိုများ နားပါစေဦးတော့.. ဦးသိန်းစိန်လည်းသမ္မတဘ၀က
အငြိမ်းစားယူရင် မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေးထွက်မယ်ဆိုတာ သမာအာဇီဝမို့ အားပေးလိုက်ကြပါ.. အန်တီစုလည်းဒီအရွယ်ဆိုတာ အနားယူသင့်ပါပြီ.. ခါချဉ်ကောင်မာန်ကြီးလို့ တောင်ကြီးဖြိုမယ်ကြံ
ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ခဲ့သည့် မင်းသမီး လင်းဇာနည်ဇော် နောက်ဆက်တွဲသတင်း
ပဲခူးမြို့အနီး ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း တွင် သရုပ်ဆောင် လင်းဇာနည်ဇော် လိုက်ပါ စီးနင်းလာသောယာဉ်နှင့် အခြားယာဉ် တစ်စီး တို့ တိုက် မိပြီးယာဉ် မတော်တဆ မှူကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အသက်ဆုံးပါး သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည့် ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက သရုပ်ဆောင်လင်းဇာနည်ဇော် ၏ အစ်ကိုဖြစ်
ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူက အဆိုတော် သားသားပါလို့ ၀န်ခံလိုက်တဲ့ Super Model
Super Modelsဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ပရိသတ် လက်ခံအားပေးမှုတွေရရှိထားပြီဖြစ်တဲ့ Super Modelsအဖွဲ့ထဲက အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခေမာကို ချစ်သူများနေ့မှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ရှိမယ်၊ ဘယ်လိုပုံစံဖြတ်သန်းသွားဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ သူမရဲ့ အချစ်ရေးကို မေးမြန်းဖြစ်တဲ့အခါ သူမက ‘ခေမာ ချစ်သူများနေ့မှာ ရှိုးဆိုဖို့ရှိပါမယ်။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရရင် အချစ်က နားလည်ရခက်ပါတယ်။ နားလည်မှုရှိတဲ့အချစ်ကတော့ ခိုင်မြဲပြီး၊ နားလည်မှုမရှိတဲ့ အချစ်ဆိုရင်တော့ ခိုင်မြဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်မှာ အရေးကြီးဆုံးကတော့ နားလည်မှုနဲ့သစ္စာရှိမှုပါပဲ။ ခေမာအချစ်ကို တွေ့နေ
တာကြာပါပြီ။ သူကလည်း အနုပညာလောကထဲကပါပဲ။ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သားသားပါ။ ခေမာ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း လက်ရှိ ဖြစ်
အနေများ အကြမ်းဖက် မှုသို့
ပြောင်းလဲ ရောက်ရှိ လာပါက
မြန်မာပြည်က တစ်ခုတည်းသော အိမ်ထောင်ဖက်ရှာပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီသို့ သင်္ဘောသား၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာကစပြီး လူမျိုးစုံ လာရောက်လျှောက်ထားလျက်ရှိ၊ လျှောက်ထားသူ၏ အချက်အလက်လုံခြုံရေးကို ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဟုဆို
အလုပ်အကိုင် မအားလပ်၍ ချစ်သူရည်းစား၊ အိမ်ထောင်ဖက် ရှာဖွေရန် အချိန်မရသည့် လူပျိုကြီးများအတွက် ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် အိမ်ထောင်ဖက် ရှာဖွေနိုင်ပြီဟု မြန်မာ သူငယ်ချင်းများ ရှာဖွေသူ ကုမ္ပဏီလီမိတက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
၄င်းက “ကိုယ့်ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်ဟာ ကိုယ့်ဘဝလောက် အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်မှာ ရှိသင့်တဲ့
(၁) အောင်ဆန်းသူရိယ အေးချို (၁၉၄၈) -
စနေနေ့က စတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ အားလုံး ပါဝင် နိုင်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပွဲတော်ကြီးရှိ ပါ တယ်။
ကလေး ပုံပြောပြိုင်ပွဲ၊ ဟောပြောပွဲ၊ စာရေး ဆရာ များက စာအုပ်လက်မှတ် ထိုးရောင်းချပွဲ၊ ဓာတ်ပုံပြပွဲ၊ ကာတွန်းပြပွဲ၊ ရုပ်ပြောင် ရေး ဆွဲခြင်း စတဲ့ စတဲ့ အစီ အစဉ် တွေ ပါဝင်တဲ့ ပွဲကြီး ပါပဲ။နေရာက အလုံမြို့နယ် ရှင်စော ပု လမ်း
Myanmar Event Park (MEP) မှာပါ။ ဒီအစီ